Kalkaaliso u diidey nin dhimanaya ambulans oo Svea hovrätt dacwaddeeda dhageysaneyso - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kalkaaliso u diidey nin dhimanaya ambulans oo Svea hovrätt dacwaddeeda dhageysaneyso
La daabacay måndag 11 mars 2013 kl 14.33
Maanta ayaa maxkmada Svaea hovrätt bilowdey dhageysiga dacwad ka dhan ah kalkaaliso caafimaad oo ka howl-gali jirtey SOS Alarm oo ah xarunta la waco markey jirto xaalad degdeg ah. Haweneyd kalkaalisada ah ayaa u diidey in ay ambulans u dirto nin dhafta ka sii baxeysey oo soo wacay SOS Alarm.
Waxay aheyd bishii januari 2011 markii ninkaan oo 23 sanno jir ahaa uu ka soo wacay gurigiisa SOS Alarm. Ninka ayaa SOS Alarm u sheegay in xanuun hayo ayna dhib ku tahay in uu neefsado. Waxuuna codsadey ambulans in loo soo diro balse looma dirin, waxuuna u geeriyoodey xanuunkii hayey.
Maxkamada deegaanka Stockholm ayaa ka cafisey eedeyn loo jeedyey kalkaalisada oo aheyd in ay sabab u noqotey geerida ninkaas. Maxkmada ayaa sheegtey in aysan hubun ninka noolaan lahaa hadii ambulanska horey looga diri lahaa.
Laakiin xeer-ilaaliyaha ayaa racfaan ka qaatey go'aanka maxkmada waxuuna racfaankiisa ku sheegey falka ay ku kacdey kalkaalisado in ay ku filantahay in lagu helo sababida geerida ruux kale.
Haweyneyda kalkaalisada ayaa shaqadeeda weydey dhacdadaan ka bacdii.